Ny fanjavonan'ny bookworms tamin'ny taonjato faha-21 - famakiana boky
Raha manontany ny tanora isika, ny valiny azontsika matetika dia: “Tsy manam-potoana hamakiana aho!” Ary mety hifanaraka amin'ny zava-misy izany, na dia mety hapetraka eo amin'ny fametrahana laharam-pahamehana aza izany.
Fa ny tanora manokana dia tsy mihalehibe intsony amin'ny boky iray; fa ny ankamaroan'izy ireo dia mandany fotoana miresaka amin'ny telefaona, milalao lalao amin'ny finday avo lenta, miserasera amin'ny Internet ary mampiasa media sosialy. Ary avy eo dia hisy ny sekoly, angamba ny fanatanjahan-tena sy ny fianakaviana - aiza no mbola misy toerana hamakiana?
Ny ady hevitra faharoa sy azo takarina dia: “Tsy manam-bola hividianana boky aho!” Eny, raha mamaky be dia be ianao dia tsy maintsy mandany vola ary miaraka amin'ny fikambanan'ireo vondrona bookworms, dia efa afaka mikarakara fialamboly lafo vidy ianao.
Mazava ho azy, ireo mpivarotra lafo indrindra farany nataon'ny mpanoratra malaza dia amidy hatramin'ny 30 euro, eo ho eo amin'ny 14-15 Euros. Amin'ny boky 3 fotsiny isam-bolana, ny tsirairay dia afaka mamorona ho azy ny vidin'ny fandaniana boky.
Tsy mahagaga noho izany raha ny fanadihadiana iray fanta-daza avy any Angletera dia nahita fa ny fitondran-tena amin'ny famakiana dia miankina amin'ny vola miditra. Ohatra, multimillionaire Bill Gates dia nilaza fa namaky boky 50 mahery isan-taona, ary nilaza i Mark Zuckerberg fa mamaky boky roa isam-bolana.
Ao amin'ireo tokantrano tsy dia misy karama firy, ny haino aman-jery elektronika no nisafidy ary fahita lavitra ny televiziona nojerena noho ny boky. Ary avy eo misy ny ambaratonga samihafa amin'ny fanabeazana.
Miankina amin'ny haavon'ny fanabeazana no ampitaina amin'ny ankizy ny fomba fijery sahaza azy. Ireo tsy mahay mamaky teny tsara dia tsy afaka mamelona ny zanany koa. Ka tsy omena fotoana hahaliana anao ny boky. Mifanohitra amin'izany, ny ankizy avy amin'ny fianakaviana manankarena sy nahita fianarana dia entanina hamaky bebe kokoa ary hamporisihana ny fampiasana boky.
Ary avy eo misy ny nomerika, izay raha ny marina dia tsy manome afa-tsy zavatra iray mifandraika amin'ny famakiana: fanelingelenana! Rehefa dinihina tokoa, zatra mandray vaovao, vaovao ary tantara haingana isika izao.
Tsy mila mamaky boky 400 pejy intsony isika vao hahatakatra zavatra. Ataontsika amin'ny endrika fohy amin'ny lovia volafotsy izy io. Ny vaovao, ny vaovao ary ny fampahalalana rehetra dia voaomana amin'ny fomba ahafantarantsika izay tiantsika ho fantatra aorian'ny lahatsoratra bilaogy fohy misy teny 500 fotsiny.
Tsy misy fanontaniana momba izany, ny taranaka ankehitriny dia tsy vonona handray ny ezaka famakiana fotsiny. Raha ny marina, nanjary kamo be momba izany izy.
Antony tsara hamakiana
Hainay izao ny fialan-tsiny rehetra manakana antsika tsy hamaky. Ary eny, fialantsiny fotsiny ireo. Satria tsy mila mpitraka olona mahay vao afaka mamaky. Rehefa dinihina tokoa, ny ankamaroan'ny olona dia manana fotoana ahazoana karapanondro maimaimpoana ao amin'ny tranomboky akaiky indrindra.
Ho fanampin'izay, noho ireo sehatra toa an'i Rebuy na E-Bay, dia azontsika atao foana ny mividy boky efa nampiasaina ho kely lavitra. Ary raha ny toetran'ny mpampiasa haino aman-jery maoderina dia azontsika atao ny mandray ny orontsika ary manova zavatra. Fa inona no hatao? Ary tena mitondra ahy be tokoa ve ny famakiana?
Amin'ny ho avy, ny tsy fisian'ny fitondran-tena mamaky teny amin'ny zanatsika dia mety hanjary olana. Ny isan'ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra dia mitombo, ny fahafahan'ny mpianatra maneho ny heviny dia mihena, mihamaro ny ankizy manoratra naoty ratsy amin'ny fiteny alemanina, tsy mahay tsipelina sy fitsipi-pitenenana ary raha tsy izany dia tsy mianatra mifantoka amin'ny lohahevitra iray intsony mandritra ny fotoana maharitra. Misy ny tsy fahampian'ny fanehoan-kevitra sy fahaiza-miteny; fa kosa, ny teny tanora tsy misy dikany sy ny tsy marim-pototra dia voatazona ao amin'ny fahatsiarovana ireo ankizy.
Ny famakiana boky dia afaka manome anao be dia be ary manampy amin'izany rehetra izany:
Ny famakiana dia toy ny mandeha any amin'ny tontolo hafa. Marina fa izay mamaky dia tsy afaka mampitaha izany amin'ny fijerena horonantsary maharitra adiny 1,5. Ny famakiana dia mamorona ny sarinao manokana ao an-dohanao, manentana ny saina sy ny saina ary mamorona tontolo iray ahafahanao milentika lalina. Avy amin'izany, mivoatra ny fahafinaretana amin'ny famakiana, satria toy ny misitrika amin'ny andian-tantara tianao manokana miaraka amin'ny pejy tsirairay.
Mampiroborobo ny fifantohana ny famakiana, misy vokany miala sasatra ary manampy anao hatory. Ny mpamaky dia tokony hifantoka amin'izay novakiany mba hahatakarana ny atiny. Ary mandritra ny fotoana maharitra kokoa. Mety ho tombony lehibe io, indrindra ho an'ny ankizy, satria tsy maintsy mifantoka ela kokoa any am-pianarana. Tsy maintsy ianarana koa izany. Ary na dia mahasosotra sy mampihetsi-po fotsiny aza ny fihoa-pefy tafahoatra amin'ny Facebook sy Co., ny famakiana fotsiny dia manome antoka ny fandriam-pahalemana sy ny fialan-tsasatra. Noho izany, misy dikany kokoa ny maka boky tsara alohan'ny hatory fa tsy hiroboka amin'ny fiankinan-doha amin'ny Netflix.
Mampianatra ny famakiana fa tsy vao izao no nahare izany. Fa mbola marina izany, satria na iza na iza mamaky dia manalalaka ny faravodilanitra. Ary tsy amin'ny sehatry ny fiteny na amin'ny resaka fitsipi-pitenenana sy tsipelina ihany, fa koa amin'ny sehatry ny famoronana hevitra, ny fahazoana ary ny fahitana an'izao tontolo izao. Izay mamaky dia mieritreritra momba izany, mamorona fototra vaovao hiadian-kevitra ary hampivelatra bebe kokoa ny toetrany. Ary tsy maninona izay tena vakintsika.
Ilaina tokoa ny miatrika ny resaka famakiana indray mandeha. Ary ho an'ireo kofehim-boky rehetra any: tohizo fa tsara ianao!
Pejy fandokoana Ilay andriambavy sy angano angano
Snuggly sy Yawny | Ny lokon'ny ba kiraro
Fox ianao nangalatra ny gisa - naoty na soratra
Mirehitra eo amin'ny hazo krismasy ny jiro - naoty na soratra
Ny lakolosy dia toa tsy mamy kokoa - naoty na lahatsoratra
Ahoana no hidiran'ny tsipika amin'ny menaka nify | Fanontaniana momba ny zaza
Manimba ny masonao ve ny hazavana ratsy? Fanontaniana momba ny zaza
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 29. Desambra 2020 4. Janoary 2021 Sokajy freetime sy fanatanjahan-tenaKeywords boky, Voalavo boky, Voalavo boky, Bookworm, lesen, mianatra mamaky
Ny eritreritra iray momba ny "Ny famongorana ny kankana amin'ny taonjato faha-21"
Stefan hoy izy:
Desambra 30, 2020 amin'ny 15:06 am
Mahamenatra fa lasa tsy fanao intsony ny famakiana. Saingy heveriko fa izany dia raharaha voalohany ao an-tranon'ny ray aman-dreny, raha tsy misy famakiana anao amin'ny fahazazanao, dia tsy hohadinoinao ireo fahatsiarovana tsara sy ireo "dia" nataonao niaraka tamin'ny bokin'ny zanakao.
indray Lahatsoratra taloha: Fiterahana - fihenjanana ateraky ny fahasosorana
more Lahatsoratra manaraka: Zumba ao an-trano - fanatanjahan-tena fanatanjahan-tena